Ogaden News Agency (ONA) – Qubanaha Wararka Ogadenya ee Xarunta Dhexe.
Qubanaha Wararka Ogadenya ee Xarunta Dhexe.
Posted by ONA Admin	/ August 11, 2018
Wararka naga sòo gaadhaya wadanka Ogadeniya gaar ahaan Xarunta Dhere ee Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya (CWXO) ayaa waxay sheegayaan in dagaal dhexmaray shacab iyo kooxda hawaarinta. Warkan ayaa sheegaya in shacab gaadhi saarraa ay kooxda hawaarintu dhaawac u gaysteen.
Warkan ayaa intaas ku daraya in shalay Jumcihii taariikhduna ay ahayd 10/8/18 deegaanka lagu magacaabo Dhurwaa – Hararaf oo degmada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo katirsan waxay hawaarintu xabad ku fureen gaadhi shacab urarraa waxaana ku dhaawacmay 4 qof oo shacab ah.
Isla taariikhdan 10/8/18 meesha loo yaqaano Balli-Dhiig oo degmada Gaashaamo ee Gobolka Jarar katirsan waxay shacabkii tuuladaasi werareen kooxdii hawaarinta ee deganayd tuladaa waxaana lawareegay tuladii shacabkii hawaarintina way kacarareen tuuladii waxayna shacabkii gacanta ku dhigeen hub iyo saanad aad u badan.